ချိန်ဘာလိန်ထက် ကီရန်ဂစ်ဘ်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းက ပိုအထိနာကြောင်း ၀င်းဂါးဝန်ခံ လာကာဇက်တီအား တို? - Yangon Media Group
အာဆင်နယ်နည်းပြအာစင် ၀င်းဂါးက နွေရာသီတွင် အသင်းမှထွက်ခွာသွားသော ချိန်လာလိန်နှင့် ကီရန်ဂစ်ဘ်တို့တွင် ဂစ်ဘ် ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းက ပိုအထိနာကြောင်း ၀န်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
ဂစ်ဘ်သည် အာဆင်နယ်အကယ်ဒမီ မှထွက်ပေါ်လာသူဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ် ကတည်းက အသင်းကြီးတွင်စတင်ကစားခွင့် ရခဲ့သူဖြစ်ကာပြိုင်ပွဲ အရပ်ရပ်တွင် အာ ဆင်နယ်အတွက် ပွဲပေါင်း ၂၃၀ ကစားခဲ့သူဖြစ် သည်။
သို့ရာတွင် ယမန်နှစ်ရာသီက ပရီးမီး ယားလိဂ်တွင် ၁၁ ပွဲသာကစားခွင့်ရခဲ့ခြင်း နှင့် ကစားသမားသစ်ကို လာစီနက်ရောက် ရှိလာခြင်းတို့ကြောင့် ပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်အ တွက် အပြောင်းအရွှေ့နောက်ဆုံးရက်တွင် ၀က်စ်ဘရွန်းသို့ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လာ မည့်ပွဲစဉ်တွင် အသင်းဟောင်းအာဆင်နယ် နှင့် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
နည်းပြ၀င်းဂါးက ” ကီရန်ဂစ်ဘ်ဟာ အာဆင်နယ်မှာ အသက် ၁၀နှစ်ကတည်းက ပညာသင်ကြားလာ သူဖြစ်လို့ သူ့ကိုဆုံးရှုံး ရခြင်းဟာ ချိန်ဘာလိန်ကိုလက်လွှတ်ခဲ့ရခြင်း ထက်အထိနာစေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်တောင်ပံ ကစားသမားတစ်ဦးအနေနဲ့ စရောက်လာ တာဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေရာမှာ မတိုးတက် နိုင်လို့ သူ့ရဲ့ဘောလုံး ဥာဏ်နဲ့ လျင်မြန်မှုအရ သူ့ကို ဘယ် နောက်ခံလူအဖြစ် ပြောင်း လဲပစ်ခဲ့တာပါ။ အကယ် ဒမီကစားသမားတွေမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင် မှု၊ အသင်းအပေါ် ပေးဆပ်မှုနဲ့ လေးစား မှုအပိုင်းတွေ မှာသာမ က ဘော လုံးစွမ်းရည် မှာပါ ကြီးမားတဲ့ တန်ဖိုးတွေရှိနေကြပါ တယ်။ ဂစ်ဘ်ဟာ အသင်းက ထွက် ခွာခွင့်တောင်းခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် သူ့အသက် ၂၇၊ ၂၈အရွယ်မှာ ပွဲကစားခွင့်ကိုလိုချင်မှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းအတွက် နှစ်ပေါင်း များစွာပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ် ယောက်က ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့လည်းမသေ ချာတော့ဘူးဆိုရင် သူ့ကိုလက်လွှတ်ဖို့ဆုံး ဖြတ်ရမှာပါပဲ။ ကိုလာစီနက်ကိုခေါ်ယူနိုင် ခဲ့ပြီးနောက်မှာ မွန်ရီရယ်လည်းရှိနေလို့ ဘယ်နောက်ခံလူသုံးဦးထားဖို့ မဖြစ်နိုင် တော့တာက အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ် ခုဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ဆိုခဲ့သည်။
တစ်ဆက်တည်းတွင် ၀င်းဂါးက လာ ကာဇက်တီမှာ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အီယန် ရိုက်နှင့် နီးစပ်တူညီသောကစားသမားမျိုး ဖြစ်ပြီး အီယန်ရိုက်နှင့်မာန်ပြင်းပြင်းကစား ရန် အနည်းငယ်လိုအပ်နေကြောင်း သုံး သပ်ခဲ့သည်။ ၀င်းဂါးက ” လာကာဇက်တီနဲ့ အီယန်ရိုက်တို့ဟာ နီးစပ်တူညီကြပါ တယ်။ လာကာဇက်တီက မာန်ပြင်းပြင်းကစား တဲ့နေရာမှာ အီယန်ရိုက်ထက် အနည်း ငယ်လိုအပ်နေပါတယ်။ အီယန်ရိုက် ခေတ်တုန်းကထက် ခုခေတ်နောက်ခံ လူတွေက ကစားပုံပိုမြန်လာကြပေ မယ့် လာကာဇက်တီအနေနဲ့အကောင်း ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ တယ ” ဟုဆိုခဲ့သည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံသပိတ်တိုက်ပွဲ (၂၇)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်
ရေတွင်းထဲတွင် ခြောက်ရက်ကြာ ပိတ်မိနေသော ကလေးငယ်ထံ ရောက်ရှိရန် စပိန်ကယ်ဆယ်ရေး သမားများ ကြို?
မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး တံတား အမှတ်(၁) ကို မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီးမည်ဟု လူမှုကွန်ရက်တွင် တင်ထားမှု?
မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်းမှ လေ့ကျင့်ရေး လေယာဉ်တစ်စင်း မော်လမြိုင်လေယာဉ်ကွင်းသို့ အ
စစ်ကိုင်းတွင် သဘာဝဘေး (သို့မဟုတ်) အနီးနားက အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ် ငလျင်အကြောင်း ပညာရှင်နှစ်ဦ